Macalimad loo xiray kufsi ay u geesatay 16 Caruur oo dhigtay goob xanaanada caruurta ah
HomeWararka Maanta SomaliskaMacalimad loo xiray kufsi ay u geesatay 16 Caruur oo dhigtay goob xanaanada caruurta ah
June 26, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
ugu danbeyn Maxmada Degmada Kalmar ayaa Xabsi ku xukuntay Haweeney 30 sano jir oo kufsi u geesatay 16 caruur ah oo dhigtay goob Xanaanada caruurta ah oo ay macalimad ka aheyd.
Haweeneyda oo horay loogu heestay shaki la xiriira 9 caruur ah oo kufsi u geesatay ana faroxumeen ayaa dib waxaa loogu helay 7 kale kadib baaritaan la sameeyay waxana Maxkamada Degmada Kalmar ay amartay in la xiro.
Haweeneyda ayaa markii ugu horeesay la xiray bishan june 11-keeda waxana 6 kamid kiisaska loo heesto ay dhaceen sanadkii 2014 ilaa 2016 kuwaasi oo ahaa faroxumeen.
sida ay ku warameyso Xeer-ilaaliya Linda waxaa jira nin kale oo 35 sano jir ah kaasi oo isna loo heesta kufsi loo geestay 6 caruura ah lakin Linda ayaa intaasi ku dartay in ninkani loo heesto dambiyo kale.
Sweden ayaa kamid ah wadamada aduunka ee ciqaabta adag lagu muteesto marka ay timaado kufsiga lagula kaco caruurta iyo dhalinyarada aan qaan gaarin.